San Htun's Diary: ရန်သူတော် နံပါတ်ဝမ်း...
၂၀၁၉ ဇွန် ၁၆ ပီအေရုံးမှာ အလုပ်ဝင်ပြီး တပတ်အကြာ ကိုယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အောက်ထပ်အင်ဂျင်နီယာဌာနက ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေကို သွားနှုတ်ဆက်တော့ မြန်မာတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးလို့ ဝမ်းနဲ့သိခဲ့တယ်။ အရပ်မြင့်မြင့် အသားမဖြူမညို အိန္ဒိယနွယ်ဖွား အစ်ကိုကြီးတယောက် မြန်မာနဲ့လုံးဝမတူဘူး။ နောက်တော့ ဂျမားက အရင်တုန်းကလို နေ့လည်စာလာစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ရော ကိုယ့်ဌာနထမင်းစားခန်းက အိန္ဒိယသားတွေက မဖော်ရွေတာနဲ့ရော အောက်ထပ်မှာ နေ့လည်စာသွားဖြစ်တယ်။ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ ရေလာဖြည့်၊ ကော်ဖီလာနွေးတတ်တဲ့ ဝမ်းနဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့။ ဝမ်းနာမည်က ထွန်းထွန်း ကိုယ့်နာမည်က စန်းစန်းဆိုတော့ မင်းတို့မြန်မာနာမည်တွေကလည်း နာမည်တူနှစ်လုံး စန်းစန်း၊ ထွန်းထွန်းတဲ့ အင်း…နောက်မြန်မာတယောက်လာရင် ဝင်းဝင်း ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး ရယ်ရသေးတယ်။ ဝမ်းမိဘတွေက ပန်ဂျပ်နွယ်ဖွား ဗုဒ္ဓသာသာ မြန်မာစကားကို ကျွှမ်းကျွှမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်တယ်။ ဝမ်းက ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူ အသက် ၄၀ မပြည့်သေးဘူးလို့ ခန့်မှန်းရတယ် အိမ်ထောင်မရှိ လူပျို။ ဖိလစ်ပိုင်ကြီးနေသန်က စန်းစန်း မင်းမှာ မြန်မာအသိ မိန်းကလေးတွေ မရှိဘူးလား… ဝမ်းကို စပ်ပေးလိုက်ပါလား…ဟင်။ ဂျမားက စန်းစန်း ဝမ်းက စိတ်ကောင်းတဲ့ လူကောင်းတယောက်ကွ လူပျို အိမ်‌ထောင်မရှိဘူး။ မင်းတို့နှစ်ယောက်ကို စပ်ပေးရမယ်…ဟမ်… လက်ကာပြလိုက်တယ်။ ဝမ်းဟာ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး အကုန်သိတယ် ဂျမားနဲ့ ငြင်းခုန်ကြတယ်။ ကိုယ်က အမေစုထောက်ခံမယ်မှန်းသိတော့ မြန်မာပြည်ကလူအများစုက အမေစုကို ဘုရားလိုကိုးကွယ်ကြတယ်တဲ့။ သူက အမေစုကို မကြိုက်ဘူး နိုင်ငံရေးမလုပ်တတ်ဘူး မတော်ဘူး သူ့ပါတီမှာ ထောင်ထွက်တွေ ခန့်ထားတယ် ငယ်ပြီးပညာတတ်တဲ့သူတွေ နေရာမပေးဘူးတဲ့။ တခုခုဆို မေမေ ဘာမှမပြောဘူးလားနဲ့ ကိုယ့်ကိုခနဲ့တယ်။ ဂျမားက စုကြည် လာဘ်စားတယ် ထောင်ထဲထည့်မယ် ဝမ်းက စုကြည် လာဘ်မစားဘူး.. ထောင်ထဲထည့်မယ်လို့ ပြောပြီး ကိုယ့်ကို စကြတယ်။ ကိုယ်က စိတ်တိုပြီး ဂျမား ယူ ရန်သူတော် နံပါတ်တူး ဖြစ်ချင်လို့လား။ ဂျမားက ဘာလဲ အဲ့ဒါဆိုရင် ရန်သူတော်နံပါတ်ဝမ်းက ဝမ်းလားဆိုပြီး ရယ်လိုက်တာ။ ထိုင်ဝမ်ကြီးဝမ်က ဂျမားနဲ့ဝမ်း ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကို ထောင်ထဲထည့်လိုက်မယ် အမှန်ပဲ ဝမ်ရေ။ မေမေစု အမှားတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ် ဥ◌ီးသန်းရွှေက စေ့စပ်ညှိုနှိုင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုတာကို လက်မခံဘူး။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခိုင်းလို့ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲသွားတာတဲ့။ ကိုယ်ကတော့ အမေစု မှားချင်မှားမယ် သူ့လောက်ဘယ်သူမှ တိုင်းပြည်ကို မပေးဆပ်နိုင်ဘူး။ သူ့ဘဝကိုစတေးပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် လုပ်နေတာ။ ကဲ အဲ့ဒါဆိုရင် အမေစုမှ မဥ◌ီးဆောင်ရင် ဘယ်သူဦးဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိသလဲ။ အဲ့ဒီလိုဘေးထိုင်ဘုပြောနေမဲ့အစား တိုင်းပြည်အတွက် တခုခုလုပ်ပေးပါလား အဲ့လိုဆိုတော့ သူက ကနေဒါနိုင်ငံသားတဲ့။ ဂျမားနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ ပြောကြတော့ ကိုယ်က ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူး တရားမဝင် ဘင်္ဂါလီတွေတော့ ရှိတယ်လို့ပြောတော့ ဝမ်းက ဟုတ်တယ် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိဘူး တရားမဝင်တဲ့သူတွေတော့ ရှိတယ်လို့ သေသေချာချာ ရှင်းပြတယ်။ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်တည်း ရှိတော့မှ အစ်မ နောက်ဆို ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလို့ မပြောနဲ့ သူတို့က လက်မခံဘူး သတင်းတွေမှာ ပုံကြီးချဲ့ထားတော့လေ။ သူတို့က လူကောင်းတွေမို့ ဘာမှပြောမှာမဟုတ်ဘူး တချို့က လူ့အခွင့်အရေးဘာညာနဲ့ ညစ်လို့ရတယ် ပြသနာဖြစ်မှာစိုးလို့ သတိပေးတာတဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်း အကုန်သိ ပြီးတော့ ယုံမှားသံသယတွေနဲ့ ဝိပတ်သနာနဲ့ သမာဓိ မကွဲဘူးဘာဘူးလေးနဲ့။ ဆရာတော်တွေကို မေးလျှောက်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ သူက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို မသွားဘူး။ မြန်မာတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာရင် အတင်းတုပ်နေကြတာ များတယ်တဲ့။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ်သိချင်တာတွေကို ဆရာတော်တွေကို မေးလျှောက်မှ ရှင်းသွားမှာကို။ သူ့အိမ်အောက်ထပ်က မြန်မာတယောက် အိပ်ယာထဲမှာ ဆုံးသွားတာကို ဝမ်းက ကြောက်နေတယ်တဲ့။ ပရိတ်တရား ဖွင့်ထားပါလားလို့ အကြံပေးတာကိုလည်း လက်မခံဘူး။ တော်သေးတယ် ကိုယ်က မကြောက်တတ်ဘူး အဲ့ဒါကြောင့်လည်း တယောက်တည်းနေရဲတာ။ ဆူနမ်ဆို သရဲကြောက်တတ်လို့ တိုက်ခန်းဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံရှိတာတောင် မဝယ်ရဲဘူး တယောက်တည်းနေရမှာ ကြောက်လို့တဲ့။
Cajo’n del Maipo ‌‌ရေခဲတောင်... ချီလီနိုင်ငံ မြို့တော် ဆန်တီရာဂိုနဲ့ တနာရီခွဲအဝေး
ဝမ်းက ဂျက်ဆင်ဟိုက်မှာ နေတယ် ကိုယ်နဲ့နှစ်ဘူတာအဝေးမှာ။ ကိုယ်က အိမ်ကနေ အနှေးရထားစီးပြီး ဂျက်ဆင်ဟိုက်ရောက်ရင် အမြန်ရထား အီးကို ဂိတ်ဆုံးဝေါထရိတ်စင်တာအထိစီး။ ပြီးရင် နယူးဂျာဆီသွားတဲ့ PATH ရထား တဘူတာစီး။ တနေ့ ဘေးကဟမ်းကယ်ရီအိတ် လဲကျလို့ ဆောရီးလို့ တောင်းပန်တာကို ရပါတယ်လို့ပြောပြီး စာဆက်ဖတ်နေလိုက်တာ အစ်မ ဘာစာအုပ်ဖတ်နေတာလဲလို့ မေးလာတော့မှ မော့ကြည့်လိုက်တော့ လားလား ဝမ်းပါလား။ ချိန်းထားရင်တောင် လွဲနေဥ◌ီးမယ် ခုတော့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် တည့်တည့်တိုး။ ကိုယ်ဖတ်နေတာက Delia Owens ရဲ့ Where the crawdads sing စာအုပ်။ စာအုပ်က ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းနေတော့ ဘေးဘီကို သတိမထားမိဘူး။ ကိုယ်က ရထားစီးရင် စာဖတ်ရင်ဖတ်၊ မဖတ်ရင် အိပ်နေတတ်တယ်။ အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတယ် ဆိုပါတော့။ အသိတယောက်နဲ့ ဆုံနေတာကို စာအုပ်ဆက်ဖတ်နေရင် မကောင်းတတ်လို့ ဝမ်းနဲ့စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ်။ သူက ရုံးတရုံးမှာ သင်တန်းသွားတက်မှာ မတက်လည်းရတယ် သင်ယူချင်လို့တဲ့။ ဝမ်းက ၁၉၉၈ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ ြသဇီကို ကျောင်းသွားတက်တယ် mechanical engineering ။ ပြီးတော့ ကနေဒါပီအာရလို့ တိုရန်တိုမှာ ကျောင်းတက်တယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ်မရလို့ လူက ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ခု အလုပ်ရတော့လည်း ကြောင်တောင်တောင် ဂေါက်တောက်တောက် ဖြစ်နေတုန်းပဲ (ဟီး ...စိတ်ထဲကနေ ပြောတာ) :) ။ ကနေဒါမှာ အန်ကယ်ကြီးတယောက်ကို အလုပ်သွင်းပေးဖို့ အကူအညီတောင်းဖူးတယ်။ သူ့သားက ဘယ်ကျောင်းထွက်၊ ဘယ်ကုမ္ပဏီမှာ ဘယ်ရာထူး အဆင့်အတန်းနဲ့ ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကြွားပြီးမကူညီဘူးတဲ့။ တော်သေးတယ် ကိုယ်ကတော့ စိတ်ကောင်းရှိပြီး ကူညီတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တာ ကံကောင်းတယ်။ အခု စတိတ်ကအလုပ်ကိုလည်း တယောက်က သွင်းပေးတာ စတိတ်မှာ တယောက်ကမသွင်းပေးဘဲ အလုပ်ရဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့။ ကိုယ်လား စတိတ်မှာ အလုပ်ပြောင်းတာ ငါးခုရှိပြီ ဘယ်အလုပ်ကိုမှ အဆက်အသွယ်ကောင်းလို့ ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ခုလက်ရှိအလုပ်ကတော့ အရင်မန်နေဂျာဟောင်းတွေက ထောက်ခံပေးလို့ ရခဲ့တာ။ ကိုယ့်ကန်တက်ကီအလုပ်က လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေ ဆောက်တဲ့ကုမ္ပဏီ။ ကိုယ်က mechanical ၊ thermal ၊ sturctural အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတယ်။ HRSG (Heat Recovery Stream Generator) ရေနွေးငွေ့နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်တာ သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဝမ်းက သူလည်း အဲ့လိုအလုပ် လုပ်ချင်တာတဲ့။ ကိုယ်က လင့်ခ်တွေ ပို့ပေးမယ် ကိုယ့်ကို သမီးတယောက်ကို ချစ်ခင်စောင့်ရှောက်တဲ့ အန်ကယ်ကြီးက အင်ဂျင်နီယာ သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လေ။ ဝမ်းက ရုံးကို အမြန်ဆုံးရောက်တဲ့လမ်းကို သိသွားတော့ နောက်ဆို ဝမ်းနဲ့ကိုယ် အဲ့ဒီသွားတဲ့လမ်းမှာ တခါတလေ ဆုံကြတယ်။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ အန်ကယ်ကြီးနဲ့လည်း ဖုန်းဆက်စကားတွေပြောလို့ တနေ့ဆုံဖို့ ချိန်းကြတယ် ကိုယ်ကလိုက်ပို့ပေးရမယ်။ လူပျိုလူလွတ်ဆိုရင် ကိုယ်နဲ့ပေးစားချင်တဲ့ ချစ်အစ်မက စတယ်။ မလုပ်ပါနဲ့ အစ်မရယ် လူ့ဂွစာကြီး သာမီးနဲ့မတည့်ဘူး တွေ့တာနဲ့ကိုက်ကြတော့တာပဲ တကျက်ကျက်နဲ့။ အဲ့လိုမျိုး တကျက်ကျက်တွေက ညားတတ်တယ်နော် ဟမ်မ‌‌လေး... ဒုက္ခပဲ အတင်း‌ပေးစားနေကြတယ်။ ဝမ်းနဲ့အယူအဆမတူ ငြင်းခုန်ကြပေမဲ့ ကိုယ်ကူညီနိုင်တာဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ဟာ အခုချိန်ထိ သူများအကူအညီကို ယူနေရတုန်းမို့လို့ ကိုယ်ကူညီနိုင်တဲ့ အလှည့်ရောက်တဲ့အခါ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့ပါပဲ။ ကူညီတဲ့အခါမှာလည်း ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားဘဲ စိတ်ကိုရှင်းရှင်းထားတယ်။ သူတပါးဆီက နှုတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ အကူအညီ ရဖူးသူချည်းပါပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံညဏ်ပေးတာ၊ ဘယ်လိုလုပ်ကြတယ်လို့ ပြောပြတာ၊ နှစ်သိမ့်အားပေးတာ၊ အလုပ်ရှိကြောင်း သတင်းပေးတာ၊ စီဗွီကို HR ဆီပို့ပေးတာ၊ အစားအသောက် ကျွှေးမွှေးတာ။ အိုး…. ကျေးဇူးသိတတ်ရင် ကျေးဇူးတင်စရာ‌တွေ ‌ကျေးဇူးတင်ရမဲ့သူတွေမှ အများကြီး။ ကိုဗစ်ကြောင့် ရုံးတွေပိတ်လိုက်တော့ ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေကို ကျန်းမာဖို့ ဆုတောင်းစကား၊ အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်လို့ရတဲ့ဆိုဒ်တွေပို့တော့ ထိုင်ဝမ်ကြီးဝမ်က အကြောင်းပြန်လာတယ် ကျေးဇူးပဲ စန်းစန်းရေ…ဝမ်းနဲ့အတူ နေ့လည်စာစားတဲ့ အချိန်လေးတွေ သတိရမိတယ်။ ငါ့နှယ်နော် ဟိုလူကစလိုက် ဒီလူကနောက်လိုက် ‌ပေးစားလိုက် စပ်‌ပေးလိုက်နဲ့။ စိတ်လည်းညစ်ရ ရယ်လည်းရယ်ရပါတဲ့ ရန်သူ‌တော် နံပါတ်ဝမ်းရယ်။
မေ ၂၂၊ ၂၀၂၀။
မေ ၁၆ ၂၀၁၀ ဘလော့စဆောက်ပြီး စာတွေရေးခဲ့တာဆိုတော့ မေ ၁၆ ၂၀၂၀ မှာ စာရေးသက်တမ်း ဆယ်နှစ်ပြည့်ပြီ။ ဘလော့ဂါ တော်တော်များများက စာတွေမရေးကြတော့ပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ ရေးနေတုန်းပဲ။ ဖေ့ဘွတ်မှာ response မြန်တယ် စာရေးပါလားလို့ တိုက်တွန်းကြပေမဲ့ ဘလော့က သီးသန့်ဆန်ပြီး ကိုယ်ပိုင်နေရာလေးလို့ ခံစားရတယ်။ ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာရယ်၊ ရေးချင်းတဲ့စိတ်ကလေးရယ်၊ ရေးဖို့အချိန်ရယ် ရှိနေသေးရင် စာတွေအများကြီး ရေးချင်ပါသေးတယ်။ :)
Thank you very much for sharing beautiful story. After reading your post, I feel relax and love. Thanks
My first piano song...
ဖတ်ပြီးတဲ့ စာအုပ်တွေ - ၅